စေ့ထားသော စိတ်တခါး....နွေရာသိစာမေးပွဲံ ပြိးမှာ... ~ ITmanHOME
10:49 ကောင်းနိုးရာရာ No comments
စေ့ထားသော စိတ်တခါး....နွေရာသိစာမေးပွဲံ ပြိးမှာ...
နွေရာသိစာမေးပွဲံ ပြိးမှာကျနော်တို့လက်ပံတန်းမြို့ ကိုဖေဖေအလုပ်ပြောင်းဘို့ စာကျလာပါတယ်..။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ မိသားစုသင်္ကြန်ပြိးမှာပြောင်းရွေ့ ခဲ့ ပါတယ်။ကျနော်တို့ မိသားစုမှာဖေ၊မေမေ ၊ကိုကို၊မမနဲ့ ကျနော်အပါဝင်၅ဥိးရှိပါတယ်။ လက်ပံတန်းမြို့ ကရန်ကုန်-ပြည်လမ်းရဲအလယ်မှာရှိပါတယ်..။ လက်ပံတန်းမှသာရဝေါ်ဘူတာထိလမ်းခွဲလည်းရှိတယ်...။ပုသိမ်ထိတိုက်ရိုက်ရောက်နိုင်ပါတယ်..။ လက်ပံတန်းမြို့ ဟာ..ရထားလမ်းလမ်းဆုံမြို့ ဖြစ်လို့ စီးပွားရေးအနေ နဲ့ စည်ကားတဲ့ မြို့ တစ်မြို့ လည်းဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ ဒိမြို့ လေးမှာနေသားမကျသေးပါဘူး။နွေကျောင်းပိတ်ရက်တွေနဲ့ ကျောင်းဝင်ခွင့်ရဘို့ စောင့်ရင်းအချိန်ကြာအုံးမှာပါ။ ကျနော်တိုအိမ်ဟာ...ရွှေဘုန်းရောင်လမ်းမပေါ်မှာရှိပါတယ်...။ နေရတဲ့ အိမ်တွေကတော့ဗိုလ်တဲ လို့ ခေါ်တဲ့ အိမ်မြင့်ကြိးတွေပါ။အိမ်ရှေ့ ကဖြတ်သွားဖြတ်လာနည်းလွန်းတြ့ လမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့ ကုန်နေ့ တိုင်းဖြတ်တဲ့ သူ က.နည်းပါးပါတယ်မနက်ပိုင်းနဲ့ ညနေပိုင်းသာလူရှိတတ်ပြိးနေ့ ခင်းပိုင်းမှာတော့.စာပို့ သမားတစ်ယောက်နဲ့ သတင်းစာပို့ တဲ့ သူတစ်ယောက်ဘဲရှိပါတယ်.။
ကျနော်တို့ အိမ်နောက်ဘက်မှာတော့..ရဲ ၀န်ထမ်းတန်းလျှားရှည်ရှိပါတယ်..။အဲ့ ဒိရဲ ၀န်းထမ်းရိပ်သာ မှာတော့..၀န်ထမ်းတွေက ရေလာချိန်တနေ့ ၂ ကြိမ်လာပါတယ် ။ရေဘုံဘိုင် တခုကို ၁၀အိမ်တစ်ခုနန်ှုံး ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မှာတန်းစိခပ်ကြရပါတယ်...။
ရေမလောက်ငတဲ့ အတွက်ထဲ ရေလာချိန်မှာအမြဲတန်းဆူညံ့လျှက်ရှိပါတယ်။ကလေးပီပီကျနော်တို့ ခြံနောက်ဘက်ကနေ .
.ရဲတန်လျှားဝင်းရဲ့ ရေမလောက်မှု ကိုတွေ့ ရပါတယ်။ကျနော်တို့ အိမ်မှာရေဘုံဘိုင်ကအိမ်အတွင်းမှာအပေါ်ထပ်မှာ ပါ ရှိပါတယ်...။
ကျနော်တို့ မိသားစုအနေနဲကြည့် ရင် ရေကအလုံအလောက်ရတဲ့ အပြင်...ခြံထဲ မှာပါအပင်တွေလောင်းဘို့ ဘုံဘိုင်တခုလည်းအပိုပါနေသေးတယ်...။
ကျနော်နဲ့ ကိုကိုတိုင်ပင်ပြိးခြံနောက်ဘက်မှာ၃ပေအကျယ်တခါးတခုဖောက်ပြိး ပိုနေတဲ့ ပန်းခြံထဲ ကဘုံဘိုင်မှာရေမရသူတွေလာခပ်ဖို့ ရဲဝန်ထမ်းကလူတွေကိုခေါ်ခဲ့ ပါတယ်..။ သူတို့ အတွက်တော့တကယ့်ကိုအဆင်ပြေသွားပါတယ်...။ကျနော်အတွက်လည်း လူတွေအများကြိးတွေ့ ရမြင်ရလို့ ပျော်ရွှင်ပါတယ်...။ပြိးတော့ကျနော်တို့ ဖောက်ထားတဲ့တခါးကြောင့်အိမ်ဘေးကဖြတ်လမ်းလိုဖြစ်နေပါတယ်....။ကျနော်ထင်ပါတယ် ရဲဝန်ထမ်းကလူတွေအတွက်ကျနော်အိမ်ဘေးကဖြတ်လမ်းတဆင့် သွားရင် မိးရထားဘူတာ ၊ဈေး၊မြို့ ထဲ နဲ့ အတော်ပဲနိးခဲ့ ပါတယ်။
စာပို့ သမားဟာ..အရင်လို မခက်ခဲတော့ပါဘူး၊ စာတွေပို့ ချင်ရင်...ကျနော်တို့အိမ်ဘေးကဖြတ်လမ်းလေးလုပ်ထားလို့ ကျနော်တို့ ခြံထဲ ကတဆင့်ဝင်သွားပြိးပို လေ့ ရှိပါတယ်။
စာပို့သမားလေးတစ်ယောက်ဟာ ဒီရပ်ကွက်ကိုပြောင်းလာပြီး ကတည်းကကျနော်တို့ အတွက်တော့ပထမဆုံးမိတ်ဆွေပါဘဲ။ပြိးတော့ကျနော်တို့ တွေ အတွက် နေ့ တိုင်းစာပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေမျှော်ရသူပေါ့။ဘာလို့ လည်းဆိုတော့...ရဲတန်းလျားအတွက်စာတွေဝေရင်..ကျနော်တို့ က..အိမ်မှာပျင်းသူများပိပိစာပို့ သမားနြ့ လိုက်တတ်ပြိးပို့ လိုပါပဲ။ .
နေ့ တိုင်းစာပို့သမားဟာစက်ဘီးလေးနင်းပြီး တက်ကြွှစွာနဲ့ စာတွေပို့ပေးပါတယ်။
တနေကုန်ပို့ပြီးလို့ နောက်ဆုံးမှရဲဝန်ထမ်းရိပ်သာထဲ ကစာတွေပို့ ပါတယ်။ဘာလို့ လဲဆို တော့ စာပို့ သမားနြ့ ကျနော်တို့ ကမိတ်ဆွေဖြစ်နေပါပြိ..။စာပို့ သမားရဲဝန်ထမ်းရိပ်သာအတွက်စာပါရင်ကျနော်လိုက်ရမယ်လေ.
စာပို့ သမားက.အိမ်ရှေ့ ကစက်ဘီးဘီလ်းတီးခေါ်ပြိးကျနော်နဲ့ အတူရဲ ၀န်ထမ်းရိပ်သာထဲ စာပို့ ကြပါတယ်။
တနေ့ တော့အိမ်နံပါတ် (၃၈) ရှေ့ကနေ စာပို့သမားနဲ့ ကျနော်တို့ ဖြတ်သွားတော့ တံခါးမကြီးပွင့်လာပြီး
အိမ်ထဲက အဘွားအိုတစ်ယောက် ထွက်လာတယ်။
“အမေ့စာ မပါဘူးလားဟင်…” လို့ မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်။
စာပို့သမားလေးကလဲ ဒီနားတ၀ိုက်ကရှိတဲ့အိမ်တွေကို ပေးပို့တဲ့စာတွေကို အခုလေးတင်ဝေပြီးခဲ့ပြီမို့ အလုပ်သိမ်းပြီး အိမ်ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဆိုတော့ ဒီနေ့အတွက် အဘွားအိုရဲ့စာမပါတာ သေချာနေတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ မေးလာတဲ့ အဘွားအိုကို ဂရုဏာသက်မိပြီး အဘွားအိုစိတ်ကျေနပ်အောင် နောက်နေ့မှာပို့ရမယ့် စာထုပ်ထဲကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ရှာကြည့်လိုက်တယ်။ စာမရှိပါဘူး။
ဒါနဲ့ စာပို့သမားလေးက ကြင်နာစွာပြုံးပြပြီး
“စိတ်မကောင်းပါဘူး..အမေ။ ဒီနေ့တော့ အမေ့ရဲ့စာ မပါသေးပါဘူး။” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဘွားအိုက အလွန်စိတ်ပျက်အားငယ်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ တုန်ယင်နေတဲ့အသံနဲ့
ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့သားက အမေ့ရဲ့မွေးလ ရောက်တိုင်း လက်ဆောင်ပို့ပေးနေကျ။
ဒီတလတော့လက်ဆောင် နဲ့ အတူအမေ့ မွေးနေ့ အတွက်ရောက်ရမှာ၊
ဘာဖြစ်လို့များ မပါပါလိမ့် ”
လို့ပြောပြီး မျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်များပါစီးကျလာပါတော့တယ်။
ကျနော်အံသြမိပါတယ်.....စာပို့ သမားနဲ့ ကျနော်လိုက်တဲ့ နေ ကစပြိးအိမ်နံပါတ်(၃၈)ရှေ့ ရောက်တိုင်းအဘွားအိုဟာနေတိုင်းစာပါလားမေးနေတာ...တလနီးပါးရှိပါတော့မယ်။
သနားတတ်တဲ့ကျနော်နဲ့ စာပို့သမားလေးက အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ အဘွားအိုကို
“အမေရယ်…ဒီနေ့ မပါလဲ နောက်နေ့ပါမှပေါ့။
ကျွန်တော် တို့ အမေ့ကို သေသေချာချာလာပို့ပေးပါမယ်နော်။” လို့နှစ်သိမ့်လိုက်တယ်။
“အေးပါကွယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။” လို့ပြောပြီး အိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားတယ်။
စာပို့သမားလေးနဲ့ ကျနော် အပြန်လမ်းမှာ စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ အဘွားအိုရဲ့အကြောင်းပဲ တွေးနေမိတော့တယ်။
နောက်တနေ့မှာ စာပို့သမားလေးက သူပို့ရမယ့်စာအထုပ်တွေထဲက အိမ်နံပါတ် (၃၈)ကို လိုက်ရှာတယ်။
မပါပြန်ပါဘူး။ ကျနော့်အိမ်ရှေရောက်တော့လည်းထုံးစံအတိုင်းအိမ်နံပါတ်(၃၈)အတွက်စာပါမလာ ကြောင်းစိတ်မကောင်းစွာပြောပါတယ်။
ဒါနဲ့ အဘွားအိုကို ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ရမလဲလို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်။
ပြီးတော့စာအိပ်ထဲ ကစာပေါ်မှာ “မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေမေမေ။ မေ မေ့ သားကြီး” လို့ကျနော်ရေးလိုက်တယ်။
အဲဒီနောက် စာပို့ သမားလာချိန်မှာ သွက်လက်တက်ကြွစွာနဲ့ပဲ ကျနော်နဲ့ စာပိုသမားလေး စာပို့ ဖို့ ထွက်လာခဲ့တယ်။ အိမ်နံပါတ် (၃၈) ရှေ့ရောက်တော့ တခါးကိုခေါက်လိုက်ပြီး ပါးစပ်ကနေလည်း
“အမေ ရေ စာပါတယ်ခင်ဗျ ၊ ဒိနေတော့စာပါလာပြီအမေ ရေ....” လို့အော်ပြောနေတယ်။ကျနော်လည်းညာလုပ်ထားပေမဲ့အမေပျော်အောင်
ကျနော်တို့ အတန်ကြာအောင် အော်ခေါ်နေပေမယ့် အိမ်ထဲက ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ
ထွက်မလာပဲ တိတ်ဆိတ်လို့ နေပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲစာပို့ သမားက စာကို စာထည့်တဲ့ပုံးထဲထည့်ပြီး ပါဆယ်ထုပ်လေးကိုတော့
တံခါးရွက်ကြားမှာ ချိတ်နေတုန်း ဘေးအိမ်က အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ထွက်လာပြီး၊
“မောင်ရင်တို့ …ဒီအိမ်က အဘွားမနေ့ ကဆေးရုံမှာဆုံးပြီကွယ့်။´´
လို့လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကြောင်အမ်းအမ်းလေး ဖြစ်သွားပြီးမှ
“ အန်တီ။ မနေ့ကလေးတင် ဒီအိမ်ကအဘွားအိုတစ်ယောက် ထွက်လာပြီး ကျွန်တော့ကို သူ့စာမပါဘူးလား လို့မေးခဲ့သေးပါတယ်။
''ဟုတ်တယ်လေ...အန်တီရဲ့ ဒိအိမ်ကအဖွားပါလို့ ''....လို့ ကျနော်လည်းပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။
“မနေ့ ကတုန်းက အဲဒီအိမ်မှာ အဘွားအိုတစ်ယောက်နေခဲ့တာ မှန်ပါတယ်။
ညက ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့သား မတော်တဆဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားရှာတယ်။
အဲဒီသတင်းကို ကြားကြားချင်းမှာပဲ အဘွားအိုဟာ ရင်ကွဲနာကျပြီး ညကဆေးရုံအပို့ မှာဆုံးသွားရှာလေရဲ့” လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ ကျနော်နဲ့ စာပို့သမားလေးဟာ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်း၊ အံ့သြခြင်း တို့ကို တပြိုင်နက်တည်း ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
ကျနော်နောင်တရမိတယ်..။အချိန်နဲ့ အမျှအဘွားအိုတစ်ယောက်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်ပေးမိတဲ့ ..အတွက်ပါ။
တသတ်မှတ်တည်းပျော်ရွှင်စေနိုင် သောစိတ်ကိုမွေးမြူထိမ်းသိမ်းထားပါလို့ 
သူတစ်ပါးကို ကူညိရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှု
ရောင့်ရဲခြင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှု
လော ကဓံတရားကို ခံနိုင်ခြင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု
စတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုသုံးမျိုးထဲ ကမှ..သူတစ်ပါးကို ကူညိခြင်းဟာ လောကမှာပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးမှန်းသိနေပါရဲ့ နဲ့ 
အဖွားအိုပျော်ရွှင်သွားအောင်ကျနော်အကြံဥာဏ်ချက်ခြင်းမရခဲတာကို စေ့ထားသောကျနော့်စိတ်တခါးကိုပဲ ကျနော့်အပြစ်တင်နေမိပါတော့တယ်။
သူငယ်ချင်းအားလုံး စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းဝေးပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။